OMN: Fadisitti weerartoonni 5 ajeefaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOMN: Fadisitti weerartoonni 5 ajeefaman.
OMN: Fadisitti weerartoonni 5 ajeefaman.
(Harargee bahaa, Oromiyaa, Sadas 8,2017) Humni addaa poolisii naannoo Somaalee jiraattota Godina Harargee bahaa aanaa Fadis araddaalee Ererii, Lafee Bobbaasaa fi Bidibooraa keessatti lola geggeessaniin jiraattota irraa namoonni lama wareegamuun himame. Weerartoota irraallee shan ajjeefamuu jiraattonni OMN tti himan.
Humna addaa poolisii naannoo Somaalee fi loltoota Wayyaaneetiin weerarri daangaa Oromiyaa fi ajjeechaan ummata Oromoorraa dhaabbataa hin jiru.
Guyyaa hardhaa Sadaasa 8 bara 2017 godina Harargee bahaa aanaa Fadis araddaalee Erer, Lafee Bobbaasaa fi Bidibooraa irratti lola geggeeffameen jiraattota irraa namoonni lama wareegamaniiru.
Araddaa Lafee Bobbaasaa jedhamurratti lola kallattiidhaan hawaasarratti geggeeffamaa ooleen namni Yuusuf Ahmad jedhaman wareegamuu jiraataan aanichaa tokko OMN tti himan.
Akka laakkofsa biyyattiitti bara 2007rraa eegalee lolatu nurratti geggeeffamaa, dachee keenyatu humnaan muramee naannoo biroo jala galaara jedhan.
Araddaa Erer jedhamurrattis lolli geggeeffamaa jiraachuu namni kun odeeffannoo qaban nutti himaniiru.
Qotee bultoota harka qullaa jiran irratti meeshaalee waraanaa gurguddatu dhukaafamaaraa, bakki lolli itti geggeeffamaa jiru Erer kan jedhamu dachee gabbataa fi eddoo qotee bultoonni humna jallisiitiin irra jiraataniidha.
Biyya Oromiyaattu haala kanaan weeraramaara jedhan.
Aanaa Fadisitti lola geggeeffamaa jiruun haga gabaasa kana qindeessinetti lubbuun namoota lamaa kan darbe yoo ta’u weerartoota irraallee shan ajjeefamuu jiraattonni OMN tti himan.
Haawasa haala kanaan duulli qindaayaan irratti banamee jiru kanaaf qaamni birmatu dhabamuun caalamtti yaaddoo biroo uumeera kan jedhan namni nuti dubbifne haata’uutii qotee bultoonni naannichaa haga danda’ameen waliif birmataa jiran.
Odeeffannoon araddaalee Ererii fi Bidibooraa irraa nu dhaqqabaa jiru ammoo lolli hamaan ammaan kana jiraachuu isaati.
Qotee bultoonnii fi tikfattoonni akka naannoo isaanii gadi dhiisanii baqataniif dhukaasatu irratti roobsamaara.
Akka namni kun jedhanitti aanaa isaanitti yeroo gara yerootti lolli geggeeffamaa jiraachuu nuuf himanii biyyuma keenyarratti nagaa dhabnee jirraa, warra nagaa keenya hin hawwinetu nutti duulee ajjeechaa nurraan dhaqqabsiisaa jira.
Qabeenya keenyas saamuu bira dabranii lafa qabiyyee akaakilee fi abaabileen keenya irratti wal horantu weeraramaara jechuun dubbatanii jiru.
Kanaaf ummanni Oromoo eddoowwan biroo jiru weerara isaanirratti geggeeffamaa jiru birmachuun akka isaanirraa qolatan gaafatanii jiru.
IluuAbbaaBooraa, Yuunivarsitiin Mattuu yeroo ammaa kana haala ulfataa keessa jirti.